Home Wararka Qarax lala beegsaday AMISOM oo Muqdisho ka dhacay & wararkii ugu...
[Faah Faahin] Qarax lala beegsaday AMISOM oo Muqdisho ka dhacay & wararkii ugu danbeeyay
Wararka laga helayo magaalada Muqdisho ayaa sheegaya inuu qarax culus oo is-miidaamin ah ka dhacay agagaarka Isgoyska Banaadir.
Wararkii ugu horeeyay ee qaraxa ayaa sheegaya inuu ahaa qarax gaari laga sooo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo lala beegsaday Kolonyo ka tirsan ciidamada AMISOM oo halkaas marayey xilliga qaraxu dhacay.
Qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayuu dhaliyay qaraxa, iyadoo wararku sheegayaan in Gaariga is qarxiyey uu noociisu ahaa NOAH. Waxaa qasaare dhimasho iyo dhaawac ah kasoo gaaray dad shacab, ilaa shan qof ayaa ku dhintay, inta la xaqiijiyey.
Faahfaahinta qaraxa ayaa hadda soo baxeysa, iyadoo ay goobtaasi xireen ciidamada Amniga, waxaana socda gurmadka dadka waxyeelladu kasoo gaartay qaraxa.